Accueil > Gazetin'ny nosy > FITIBA: Misy sambo manondrana omby ao amin’ny faritra Atsinanana
FITIBA: Misy sambo manondrana omby ao amin’ny faritra Atsinanana
Tafatsangana ny birao vaovaon’ny Firaisan-kinan’ny Terak’Ibara (FITIBA) izay hitantana ny fikambanana mandritra ny telo taona vaovao indray manomboka izao. Ny kaomisera Nankany Charlie no filohan’izany izay ahitana koa an’i ingahy Paolo izay « administrateur Civil » sady mpanolotsainan’ny praiminisitra amin’izao fotoana izao. Manampy azy ireo ny mpanakanto Malagasy iraisam-pirenena Digary, ny tale ao amin’ny asam-panjakana Dama ary ny profesora Jean Jacques, ary Thierry. Nanotrona ireto tanora mihetsiketsika ireto ny raiamandreny Velompanahy Aristide.
Nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety tetsy amin’ny toeram-pisakafoanana Telozoro tetsy Andrefanambohijanahary izy ireo omaly alarobia faha 06 desambra 2017. Mahakasika ny fampandrosoana ny faritra any Ibara izay misy distrika 13 no noezahin’izy ireo havoitra tamin’izany. Isan’ny nomarihiny manokana amin’izany ny raharahan’ny tsy fandriam-pahalemana izay manapotika ity faritra ity. Toa izany koa ny momba ny tsy firaharahan’ny fanjakana ny fanorenana fotodrafitrasa any an-toerana amin’ny asa fampandrosoana rehetra.
Mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana manokana dia ny ady amin’ny asan-dahalo no tena navoitran’ny Fitiba. Ny mpiasam-panjakana any an-toerana toa ny tribonaly, ny delege sy ny lehiben’ny distrika izay mpanao taratasy famotsiana omby halatra ary ny mpitandro ny filaminana (pôlisy sy ny zandary) no voalazan’izy ireo fa fototra ny asan-dahalo ity. Voalazan’izy ireo fa ny 70% ny asan-dahalo any amin’ny faritra Bara dia avy amin’ny mpiasam-panjakana sy ny olom-boafidy avokoa.
Nohamarinin’ny mpikambana iray tamin’ity valan-dresaka ity koa fa misy sambo manondrana omby any amin’ny faritra Atsinanana iny ka tokony ho jeren’ny fanjakana izany. Ny mahagaga hoy izy ireo dia toa jerem-potsiny io raharaha io. Mahagaga koa no antony tsy amakian’ny zandary ny tendrombohitra ao atsinanan’i Betroka tonga any Befotaka, izay mandalo ao Iakora, satria ao no misy ny omby halatra sy ny fitobian’ny dahalo alohan’ny hanondranana ireo omby ireo. Toa izany koa ny tendrombohitra ao Ihosy antsoina hoe Analambanara ary ny any Beroroha izay any amin’ny faritra andrefana sy avaratra. Raha tena hiady amin’ny asan-dahalo ny fanjakana amin’izao fotoana izao dia ireo toerana ireo no tokony hovakiana ary handehanan’ny zandary.
Raha ny voalazan’ny biraon’ny FITIBA fa hatao ho an’ny olona rehetra mipetraka any amin’ny faritra misy an’Ibara manontolo ny “dinabe” ka isan’izany ny mpiasam-panajakana rehetra izay mipetraka any. Matetika dia ny mpiasam-panajakana no manao kolikoly amin’ny asan-dahalo ity ka hatramin’ny mpiasan’ny fitsarana ka hatrany amin’ny mpampianatra sy ny mpitandro ny filaminana. Hiteny ny zanany ny Bara ary mangataka ny fanjakana hiara-mientana aminy amin’izany.
Fa isan’ny navoitran’ny FITIBA koa no fiparitahan’ny basy mahery vaika any amin’ity faritra ity. Ny kalaky no tena mahazo vahana ampiasain’ny dahalo izao.
Atahorana mafy ny hahafoana ny omby gasy ao anatin’ny 20 taona raha tsy misy ny fandraisana fepetra haingana amin’ny fanondranana omby sy ny asan-dahalo. Ny omby izay sady vakoka no harena ary fomba fiainana Malagasy hatramin’izao.
Mieritreritra fa hahitana ezaka amin’ny fandriam-pahalemana ny birao vaovaon’ny FITIBA ity izay misy ny tanora mihetsiketsika tokoa.
Nanambara ny FITIBA fa tsy manao pôlitika ary afaka miasa amin’ny fikambanana hampandroso an’i Madagasasikara manontolo fa indrindra ny faritra Ibara. Manampy ny fanjakana amin’izany asa fampandrosoana izany koa izy ireto na iza na iza no mpitondra eo hoy ihany izy ireto.